DinoSwap ၏ (DINO) TVL သည်တစ်ပတ်လျှင်ဒေါ်လာ ၃၃၀ မီလီယံအထက်မြင့်တက်ခဲ့သည် - Token Myanmar
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္financeာရေး (DeFi) သည် cryptocurrency ဂေဟစနစ်၏အလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာသည့်ကဏ္subsခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသစ်ဖွင့်လှစ်ပလက်ဖောင်း သူတို့ရဲ့ userbase ကိုတိုးမြှင့်ဖို့နဲ့ငွေဖြစ်လွယ်မှုတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟာပုံမှန်အားဖြင့်စတင်သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးစီးပွားကြီးမားသောရေကန်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။
လယ်ယာထွက်ကုန်များစတင်ရှင်သန်စဉ်ကတည်းကသုံးစွဲသူများတိုးတက်မှုနှင့်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသော့ခတ်ခြင်း (TVL) ၏စည်းကမ်းချက်များအရဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သောစီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုမှာ DinoSwap (DINO)၊ Polygon ကွန်ယက်အခြေပြု Cross-chain protocol နှင့် PancakeSwap နှင့်အခြားအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများကဲ့သို့သောပြိုင်ဘက်များဖြစ်သည် ။
DINO / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1 နာရီဇယား။ ရင်းမြစ် – မင်းကွန်း
CoinGecko မှရရှိသောအချက်အလက်များအရ DINO သည်စျေးကွက်ရောင်းဝယ်မှုသည် ၄.၂၈ ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးဇူလိုင် ၂၅ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၂.၃၀ အထိဈေးတက်ခဲ့သည်။ စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၃ ဒေါ်လာအထက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ဆက်စပ်: DeFi စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါသလား။ Siam ကဒေါ်လာ ၁၁၀ မီလျံရန်ပုံငွေဖြင့်လောင်းသည်
DeFi ၏အောင်မြင်မှုသည် crypto ဂေဟစနစ်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်သော်လည်းအလျင်အမြန်မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့်လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုစီမံကိန်းများနှင့် Polywhale Finance ကဲ့သို့သောကော်ဇောဆွဲခြင်းများသည် Polygon ကွန်ယက်တွင်အထွက်နှုန်းကောင်းသည့်လယ်ယာမြေစီမံကိန်းကိုတီထွင်သူများမပြုလုပ်မီတွင်ဖြစ်ပေါ်စေသည် တစ် "ပျော့ကော်ဇောဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ "
အမည်မသိ developer များနှင့်မတူသည့်အချက်များအရ DinoSwap သည်အကျိုးတူအရင်းအနှီးရန်ပုံငွေမှရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၄.၇ သန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကော်ဇောဆွဲရန်ကြောက်ရွံ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ယုံကြည်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။
The @DinoSwapHQ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောက်ဆူးရန်ပုံငွေမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျောထောက်နောက်ခံရရှိကြောင်းအောင်မြင်စွာကြေငြာခဲ့သည်ကိုအသင်းမှဝမ်းမြောက်မိသည် @hashed_official နှင့် @DeFianceCapital pic.twitter.com/kDbpjPOvi4
– DinoSwap (@DinoSwapHQ) ဇွန်လ 28, 2021
ဤသည်ရှေ့ဆက်တရားဝင်၏အရှိန်အဟုန်ကိုကူညီပေးခဲ့သည် လွှတ်တင် DeFi Llama မှအချက်အလက်များအရဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင်ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ကျော်သော့ခတ်ထားသောတန်ဖိုးအားလျင်မြန်စွာစုဆောင်းပေးခဲ့သော DinoSwap protocol ၏ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်ပြသခဲ့သည်။
DinoSwap စုစုပေါင်းတန်ဖိုးသော့ခတ်။ ရင်းမြစ် – Defi Llama
ပလက်ဖောင်းပေါ် TVL လျင်မြန်စွာမြင့်တက်မှုသည်များသောအားဖြင့် protocol မှရရှိသောအထွက်နှုန်းကောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်းသိလား $ XMARK လောင်းကြေးတစ် non- rebasing ကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ပါတယ် $ MARK တိုနီနှင့်တစ် ဦး ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့ elastic ထောက်ပံ့ရေးရှိသည်သောတိုကင် @chainlink ဘက်ပေါင်းစုံ #VXX အညွှန်းကိန်း? ကောင်းပြီ, သင်ယခုလုပ်! ဒါကြောင့်လယ်ယာအချို့သွားပါ $ DINO နှင့်အတူ $ XMARK – $ USDC LP စုံတွဲနှင့် TVL တွင်ဒေါ်လာ ၄.၅၅ မီလီယံဖြင့် APR ၄၂၆.၂% ခံစားနိုင်သည် pic.twitter.com/ixD7IWliW1
– DinoSwap (@DinoSwapHQ) ဇူလိုင်လ 21, 2021
အသုံးပြုသူများသည်ငွေရှင်းလွယ်သောပံ့ပိုးပေးသူအမှတ်အသားများကို protocol ၏ 'Fossil Farms' အပိုင်းသို့ USDT-USDC စုံတွဲအတွက် ၁၄.၃၉% မှ DINO-USDC စုံတွဲအတွက် ၉၀၁% အထိရရှိသည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုပရိုတိုကော၏အပိုင်းသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ပရိုတိုကော၏ 'Extinction Pools' အပိုင်းသည်အသုံးပြုသူများအား DINO နှင့်အပါအ ၀ င်တစ် ဦး ချင်းစီတိုကင်စာရင်းကိုတိုက်ရိုက်ဝေမျှခွင့်ပြုသည် Aavegotchi အဘယ်သူ၏ပြန် 79% မှ 641% အကွာအဝေး၌ရှိကြ၏ (GHST) ။
DinoSwap သည်သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏တာရှည်တိုင့်များတွင်ကြာရှည်သောသော့ခတ်မှုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောဆုလာဘ်ကိုပေးသော DINO တိုကင်များကိုအချိန်ပိတ်နိုင်သည်။
ပုံမှန် DINO တိုကင်မီးလောင်မှုများသည်မိခင်တိုကင်၏တန်ဖိုးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဂေဟစနစ်သို့ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေရန်ကူညီသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
လတ်တလောအဆိုအရ DinoSwap အဖွဲ့မှမည်သည့်အစည်းအဝေးမဆိုငါ့ကိုမေးပါ လာမည့်အစီအစဉ်များ စီမံကိန်း၏လမ်းပြမြေပုံတွင် DinoSwap AMM၊ multi-chain တံတားနှင့် gamification ထုတ်ကုန်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
Bitcoin စျေးနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၄၀,၀၀၀ တန်ပြန်မှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်ဂဏန်းနှစ်လုံးအကျိုးအမြတ်ကိုဖော်ပြသော altcoins များနှင့် DinoSwap သည်ပိုလီဂွန်ကွန်ယက်တွင်အကြီးမားဆုံး AMM များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး DeFi တိုကင်များလာမည့်သုံးလပတ်တွင်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုတစ်ခုရှိလာပါက DINO စျေးနှုန်းမြင့်တက်နိုင်သည် အထူးသဖြင့်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်လောင်းကြေးအသစ်များကမ်းလှမ်းလာပါက